CONELE ukhonkolo futha iloli - China Qingdao CONELE Group
ukhonkolo CONELE futha iloli
CONELE ukhonkolo futha iloli kuveza Qingdao CONELE Group Co., Ltd., usebenzisa isipiliyoni eziphambili ekhaya aphesheya kanye yesimanje eziphambili ikhompyutha ukumbumbuluzwa ubuchwepheshe ehlelekile sihlaziye ukucindezeleka futhi ukufuduka isakhiwo futha imoto. Ithonya nemingcele ahlukahlukene ezifana imvamisa zemvelo ukuphila ukukhathala boom kuxoxwa. Ngesikhathi esifanayo, uhlelo wokubacindezela elungiselelwe futhi entsha khulula ubuchwepheshe uketshezi esenziwayo ukunciphisa kakhulu umthelela futha uguquko phezu boom. Sine patent ezimbalwa nokwenza kahle boom isakhiwo kanye nomklamo wesistimu wokubacindezela.
I ephelele ukulawula izinga umkhiqizo, consummate umkhiqizo ukukhiqiza, le ngokucophelela izinga ukuhlolwa kubangela imoto CONELE futha ukufinyelela ekuholeni yasekhaya, lo international level ethuthukisiwe, uhlelo ingalo yonke ubamukela amapuleti steel namandla okusezingeni eliphezulu abandayo iphuma steel plate, Ukuhoxa amandla ngenhla 1000Mpa kuqinisekisa amandla okusezingeni eliphezulu nesisindo ekukhanyeni kohlelo boom. 100% we imikhono, imilente nophethiloli amathangi ashiselwe ngoba impatho ukucindezeleka. Ngamunye weld kohlelo boom lihlolwe 100% ngaphandle umonakalo noma-X-ray izithombe ukuqeda noma iziphi izici kufihlwe ngokuningiliziwe futhi kwenze kube okuhlala isikhathi eside. Sihlela njengoba usuku olunembile ngokusebenzisa wire isici ukuhlaziywa kanye ashukumisayo sekulingisa ukuhlaziywa ukuqinisekisa isakhiwo ezinengqondo kanye nokusebenza kakhulu kohlelo boom. Futhi imiphumela sibalo kanye nokuhlaziywa isakhiwo jib kuthiwa kufakazelwa isimo sezinga ukuhlolwa isikhungo ukucindezeleka-uhlobo ukuhlolwa ukufakazela Imiphumela ziyavumelana izimo zokusebenza langempela.
CONELE Iqembu waphikelela njalo ikhasimende ngamakhasimende, asebeneminyaka eminingi yocwaningo kanye nentuthuko, ukukhiqiza umuzwa of futha izimoto, ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende, yakhelwe imikhiqizo njengoba isicelo amakhasimende ', njalo sizama ukukunikeza ofanele kakhulu izidingo ukwakhiwa of futha izimoto, ukuze amakhasimende "kuphela ukhethe eyiyona, asikho isidingo ezibizayo".
Ngemva ukhonkolo futha iloli emile f ...
Okufanele ukwenze uma iphuzu Lubrication ehluleka ...